Ciidamada Nigeria oo bilaabay Duulaan cusub oo ka dhan ah Boko Xaram - Wargane News
Home Somali News Ciidamada Nigeria oo bilaabay Duulaan cusub oo ka dhan ah Boko Xaram
Ciidamada Militariga Nigeria ayaa bilaabay duulaan cusub oo ay ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada Baga oo todobaadkii hore kasoo saareen maleeshiyaadka Boko Xaram.
Magaalada Baga oo ah goobta uu ku yaal saldhigii ugu weynaa ee militariga Nigeria ee waqooyiga dalkaasi ayaa todobaadkii hore waxaa qabsaday xoogaga Boko Xaram oo halkaasi xasuuq ka geystay.
Askarta Nigeria ayaa la sheegay inay goobta isaga carareen xiligii Boko Xaram ay halkaasi la wareegtay. Maleeshiyaadka Boko Xaram ayaa la sheegay inay magaalada Baga ku dileen ugu yaraan dad gaaraya 100 qof oo rayid ah, isla markaana halkaasi ku gubay guryo aad u badan.
Ciidamada Nigeria ayaa duulaanka ay Jimichii shalay bilaabeen u adeegsanaya diyaarado gacan kasiinaya ciidamada lugta dhanka duqeynta sida uu sheegay Afhayeenka militariga oo shir jaraa’iid ku qabtay caasimada Abuja.